Barcelona Oo Racfaan ka qaadanaysa Go’aankii FIFA kaga Joojisay La Soo Wareegista Ciyaaryahanada
HomeWararka MaantaBarcelona Oo Racfaan ka qaadanaysa Go’aankii FIFA kaga Joojisay La Soo Wareegista Ciyaaryahanada
Kooxda Barcelona ayaa shaaca ka qaaday inay racfaan ka qaadanayso , go’aankii FIFA ee laga mamnuucay la soo wareegista ciyaaryahanada mudada labada sanno ah.
Xidhiidhka kubada cagta aduunka Ayaa Arbacadii Maanta soo saaray ganaax kooxda Catalanka ah laga joojinayo la soo wareegista xidigaha cusub ilaa sanadka 2015 ka ah, kaas oo macnihiisu ahaa inaanay Barca suuqa galli karin sanadkan marka uu furmo suuqa kala iibsigau iyo sanadka dambeba.
Naadiga Barcelona ayaa qoraal dheer oo ay soo saareen, dhinac isaga duwey eedaymaha FIFA ee ah inay samaysay kooxdu talaabooyin baal-marsan xeerarka iyo anshaxa soo iib siga ciyaatowda ee u yaala kooxaha dunida. waxaanay sheegtay inay racfaan ay ka qaadanayso go’aankaasi u gudbinayaan maxkamada Garsoorka ciyaaraha.
Waxa kale oo ay Barca ku codsatay qoraalkeedan, in maadaama go’aankan la saaray uu yahay mid socda oo aanu kama dambeys ahayn oo ay Racfaana ka qaadanayso , in loo ogolaado inay sii wadato qorshayaasha ay kula soo wareegayso ciyaaryahanada ee howshoodu socotay kana horeysay go’aanka FIFA.
FIFA ayaa ku eedaysay Barca inay Jebisay xeerarka caalamiga ah ee la soo wareegista ciyaaryahanada , khaas ahaan qodobada qeexaya da’da ciyaaryahanada lala soo wareegi karo , naadiguna uu la soo wareegay tiro ciyaaryahano ah oo da’doodu ka hoosayso 18 jir, isla markaana ay Akaadamiyada ku hayaan ciyaaryahano aan la marin sharciga caalamiga ah ee loo qaatay si aan waafaqsanayn axdiga u yaala FIFA.
Gudida anshaxmarinta FIFA ayaa sidoo kale ku xukuntay Barcelona ganaax lagaceed oo dhan CHF 450,000 (€369,000). waxaanay sheegtay in baadhitaano ay ku socdaan dhamaan qaabkii ay Barca ula soo wareegtay xidigaheeda qaar badan oo kamid ah.
Maxaad kala Socotaa kooxaha ugu saameynta badan suuqa kala iibsiga ciyaartoyga ?
Victor Moses: Waxaan Sii Ogaa In Liverpool Horyaalka Qaadayso
Messi Oo Jebiyey Rikoodhkii Gool Dhalinta EL Clasico ee Uu Dhigay Di Stefano